बार्सा र युनाइटेडको भिडन्त आज, कस्ले मार्ला बाजी ? | Ratopati
बार्सा र युनाइटेडको भिडन्त आज, कस्ले मार्ला बाजी ?
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeबैशाख ३, २०७६ chat_bubble_outline0
एजेन्सी – च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत क्वार्टरफाइनलको दोस्रो लेगमा आज (मंगलबार) राति स्पेनिस महारथि बार्सिलोना र इङ्लिस जाइन्ट किलर म्यानचेस्टर युनाइटेड भिड्दैछन् । बार्सिलोनाको घरेलु मैदान क्याम्प नोउमा हुने दोस्रो लेग निकै रोचक हुने अनुमान गरिएको छ ।
युनाइटेडको मैदानमा गत साता खेलिएको पहिलो लेगमा बार्सिलोनाले आत्मघाती गोल सहयोगमा अग्रता लिएको थियो । युनाइटेड क्याम्प नोउमा बार्सिलोनासँग पहिलो लेगको बदला लिन आतुर देखिएको छ । युनाइटेडलाई अघिल्लो चरणमा पुग्न बार्सिलोनासामु उत्कृष्ट पुनरागमन गर्नु पर्ने थप चुनौती छ । बार्सिलोनालाई युनाइटेडलाई रोक्न सके मात्र काफी छ ।
पहिलो लेगमा केही कमजोर देखिएको बार्सिलोना युनाइटेडका लुक शअको आत्मघाती गोल उपहारले उत्रिएको थियो । तर, बार्सिलोना दोस्रो लेगमा घरेलु सर्मथकलाई उत्कृष्ट प्रदर्शन सहित मनोरञ्जन दिने दाउमा छ । त्यसैले यी दुई टोलीबीचको भिडन्त रोमाञ्चक हुने निश्चित छ ।
यसैगरी च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गतनै आज राति क्वार्टरफाइनलको दोस्रो लेगमा इटालियन क्लब युभेन्टस र डच क्लब आयाक्स भिड्दैछन् । यस खेल युभेन्टसको घरेलु मैदानमा हुनेछ । आयाक्सको घरेलु मैदानमा अघिल्लो साता खेलिएको पहिलो लेग १–१ गोलको बराबरीमा सकिएको थियो ।
उक्त खेलमा आयाक्सको सुरुवाती अग्रतालाई युभेन्टसका सुपर स्टार क्रिष्टियानो रोनाल्डोले डाइभिङ हेड गोल गर्दै तोडेका थिए । हरेक खेलमा जादु छर्दै आएका रोनाल्डो यस खेलमा पनि चम्किने विश्वास गरिएको छ । पहिला लगेको बराबरी नतिजाले गर्दा आजको खेलमा जुन टोलीले सानदार प्रदर्शन गर्छ । उही टोली सेमिफाइनलमा पुग्ने निश्चित छ ।
मनसुनले प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रभावित
कतारलाई हराउँदै अर्जेन्टिना क्वार्टरफाइनलमा
पेरुमाथि गोलबर्षा गर्दै ब्राजिल क्वार्टरफाइनलमा
पाकिस्तान र दक्षिण अफ्रिका भिड्दै
चार वर्षमा के–के गरे राखेप सदस्यसचिव विष्टले ? अर्को कार्यकालका लागि पनि थाले लबिङ
पहिरामा थुनिएका ५१ जनालाई सेनाको हेलिकोप्टरद्वारा उद्दार
नेकपा कास्कीका ७२ वडाका अध्यक्ष र सचिवको शपथ
गुठीको जिम्मा प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई देउः बिजुक्छे
अज्ञात समूहले सिडिओलाई फोन गरेर शंकास्पद वस्तु राखिएको सूचना दिएपछि...
मेची र कोशीका १० जिल्लामा विप्लवका कार्यकर्ताले निकाले मसाल जुलुस
एयरपोर्टबाटै सीधै रेशम चौधरीलाई अस्पतालमा भेट्न पुगे सिके राउत
४१ लाख नगदसहित ८ जना हुन्डी कारोबारी पक्राउ
पोखरा महानगरको आगामी वर्ष बजेट योजनाः विकटलाई निकट ल्याउने